Kordhinta Guusha si loo hagaajiyo natiijooyinka | Martech Zone
Isniin, April 13, 2009 Talaado, Oktoobar 9, 2012 Douglas Karr
Tripp Babbitt's blog iyo joornaalada ku saabsan Fikirka Nidaamyo Cusub ayaa runtii igu soo kordhay.
Tan iyo markii uu la kulmay Tripp munaasabad kuhadal goboleed, wuxuu si toos ah ila wadaagay tan aqoontiisa iyo khibradiisa, joornaalkiisa, iyo boggiisa.
Mid ka mid ah sababaha aan u maleynayo inaan ugu raaxeysto qoristiisa iyo casharradiisa in badan ayaa ah in Tripp si naxariis darro ah u falanqeeyo meheradaha oo inta badan la ogaado in cabbiraadda iyo yoolalka aysan waligood la jaanqaadi karin dhibaatooyinka dhabta ah.
Xaaladda dhibicdu waxay ahayd shirkad cabiraysa tirada wicitaannada taageerada macaamiisha isla markaana abaalmarinaysa kooxaha macaamiisheeda iyadoo lagu saleynayo mugga wicitaannada ay awoodaan inay dhammaystiraan. Sida Tripp uu sharaxay, shirkadu ma falanqeyn sababta ay wicitaanada u helayaan iyo qiimaha kooxda adeegga macaamiisha ay ahayd marka la barbar dhigo sixitaanka. dhibaatooyinka xididka taas ayaa sababtay wicitaanada marka hore.
Dhibaatada iyo astaamaha ayaa loo qaybiyay laba waaxood oo aan waligood isla shaqeyn oo aan lahayn hadafyo guud. Ma jirto wax faa iido ah oo ku saabsan hagaajinta arinta asalka ah maadaama dhibaatooyinka ay sababaan si fudud loogu wareejiyo waaxda xigta.
In muddo ah ayaan u doodayay helitaanka waxa shaqeynaya oo si fiican u hagaajinaya, halkii aad xoogga saari lahayd wixii aan shaqeynin.
Waxaa jira wax badan oo ka mid ah madax caan ah iyo nidaamyada ganacsi ee aaminsan kuwa ka soo horjeeda… waxay kuu sheegi doonaan haddii aad guuleysato 99%, waa inaad ka shaqeysaa inaad hagaajiso 1% ugu dambeeya. Waa geedi socod jahwareer aan dhammaad lahayn oo raad raaca shaqaale la ceyriyey iyo jahwareer.
Waxaan aaminsanahay hogaamiyaasha guuleysta, shirkadaha iyo istiraatiijiyaddu inay sare u qaadaan guusha halkii ay isku dayi lahaayeen inay yareeyaan fashilka:
Baraha bulshada, waxaan u ahaa u doode awood siinta iyo awood u siinta shirkadaha inay adeegsadaan warbaahinta bulshada intii aad codsan lahayd xeerar iyo xuduudaha.
Blogging-ka, waxaan isku dayaa inaan hubiyo waxa aan qoro oo ku saabsan dhiirigelinta akhristayaasha inaad isku daydo tiknoolajiyada cusub halkii aad ka fogaan lahayd.
Hogaamiye ahaan, waan aaminsanahay isbarbar dhiga tayada shaqaalaha ee baahida ururka halkii aad isku dayi lahayd inaad ku qasabto shaqaalaha boosas la hubo inay ku fashilmeen Haddii aad leedahay jeex, ha u sheegin in aysan ahayn dubbe wanaagsan. Orod oo soo bixi dubbe haddii taasi ay tahay waxa aad u baahan tahay.
Suuqgeynta internetka, waxaa lagama maarmaan ah inaad sii wado inaad xoqdo waxa ka shaqeeya suuqgeyntaada internetka halkii aad isku dayi laheyd inaad ogaatid hagaajinta waxa aan weligood shaqeyn. Dabcan waa inaad tijaabisaa markii fursado soo baxaan, laakiin ku riix dhagaystayaashaada jihada guusha halkii aad isku dayi lahayd inaad si fudud uga fogaato guuldarada.
Xitaa waalid ahaan, waxaan ku helay habkan mid aad u caafimaad badan. Haddii carruurtaydu jecel yihiin Xisaabta (taas oo ay jecel yihiin) laakiin aysan jeclayn Daraasaadka Bulshada, kama dhigi jirin inay akhriyaan buugaagta taariikhda habeen kasta… Waxaan aad ugu dhiirrigeliyey Xisaabta. (Waxaan dalbaday buundooyin hufan dhammaan maadooyinka, in kastoo). Labadayda ilmoodba waxay leeyihiin darajooyin aad u wanaagsan… wiilkayguna hadda waa arday sharaf ku leh IUPUI, Xisaabta iyo Fiisigiska.
Xitaa waxaan ka aqrinayay Sparkpeople, oo ah goob loogu talagalay kuweena miisaanka culus oo raadinaya inay caafimaad helaan, daraasadihii ugu dambeeyay waxay muujiyeen in dadka jimicsi 10 daqiiqo maalintii ka guul badan kuwa ka shaqeeya 90 daqiiqo ee loo qoondeeyay. Jimicsiga gaagaaban wuxuu bixiyaa dareen ah waxqabad (halkii aad ka xanuunsan laheyd) dadkuna waxay u badan tahay inay ku ekaadaan jadwalka.
Tags: maaraynta isbedelkahagaajinta natiijooyinkakor u qaad guusha
Qosol badan oo aad maanta ka qortay arintan, maxaa yeelay shalay uun waxaan la kulmay Carla iyo Anna oo ka tirsan Ignite HR Consulting waxayna ka wada hadleen barnaamij tababar oo ay maamulaan oo la yiraahdo "Xoogagga" oo u muuqda mid bogaadin mudan qoraalkan. Qaadashadaydu waxay ahayd in barnaamijka Awoodaha - halkii aan ka raadin lahaa daciifinta daciifnimada - ay ka caawiso qof walba inuu aqoonsado xooggiisa, yacni waxa ay ku fiican yihiin iyo waxa uu ku qanacsan yahay, sidaa darteed waxay intaas ka badan ku qaban karaan faa'iidada ururka. iyo wanaagooda.
Sidoo kale, da 'ahaan waxaan raadinayay inaan xoog badan ku bixiyo waxyaalahan aan ku fiicanahay kuna raaxeysto, maxaa yeelay: a) waxaa jira saacado badan oo kaliya maalintii (iyo nolol), marka maxaan isku dayin inaad sameyso fiican waxa aan awoodo; b) waxaa jira in ka badan oo igu filan oo ay tahay inaan sameeyo oo aan ku xumaado ama aanan ku raaxaysan; iyo c) waa awood siinta in guusha lagu dhiso guul (iyadoon loo eegin ha ahaadaan kuwa waaweyn ama kuwa yaryar, maxaa yeelay waxaan qaataa wixii aan heli karo. :)).
Saaxiib maalin wanaagsan
Adoo diirada saaraya waxyaabaha togan iyo waxa aad jeceshahay. Anigu ma ihi naqshadeeye websaydh in kasta oo aan isku dayo weligay iskuma dayi doono inaan si fiican u maamulo. Waxaa jira kuwa kale oo banaanka jooga kuwaas oo wadada sii maraya ay shaqo fiican qaban doonaan markaa aniga oo ku qaban doona niyad jab yar. Waxaan u baahanahay inaan diirada saaro waxa aniga ii shaqeeya iyo waxa aan ku fiicanahay oo aan xitaa kaga sii fiicnaado waxyaabahaas.